Mashiinka Mashiinka Mashiinka Sunta ee Shiinaha Beeraha Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. RY AGRI
3S subsoiler taxane ah wuxuu inta badan ku habboon yahay subsoiling berrinka baradhada, digirta, cudbiga oo wuxuu jebin karaa ciidda qallafsan, fureysaa carrada iyo jajab nadiif ah Waxay leedahay faa'iidooyin qoto dheer oo la hagaajin karo, noocyo badan oo codsi ah, ganaax ku habboon iyo wixii la mid ah.
Subsoiling waa nooc ka mid ah tikniyoolajiyadda beerashada oo lagu dhammaystiro isku-darka mashiinka subsoiling iyo aaladda tamarta cagaf-cagafyada. Waa hab cusub oo beerashada leh majarafad subsoiling, xaaqin bilaa derbi ah ama jeex jeexan si loo dabciyo carrada iyadoon loo rogin lakabka ciidda. Subsoiling waa nidaam beereed cusub oo isku daraya mashiinada beeraha iyo cilmiga beeraha, waana mid ka mid ah farsamooyinka ugu waawayn ee beerashada ilaalinta. Saamaynta subsoiler-ka 3S waa mid hoose oo maxalli ah. Waa in la adeegsado majarafadda qafisyada si loo carfiyo ciidda oo aan loo furin carrada xilliyada kala-goynta deegaanka. Dhaqanku wuxuu cadeeyay in subsoiling interval-ka uu kafiican yahay subsoiling-ka dhameystiran oo si balaaran loo isticmaalo. Ujeedada ugu weyn ayaa ah in la jebiyo gunta carrada la faqay oo biyo la keydiyo.
1. Qalabku waa inuu mas'uul ka ahaado hawlgalka, aqoon u leh waxqabadka mashiinka, fahmo qaab dhismeedka mishiinka iyo hababka la qabsashada iyo isticmaalka goob kasta oo lagu shaqeynayo.
Xulo doorolo shaqo oo ku habboon. Marka hore, goobtu waa inay lahaato aag ku filan iyo dhumucda ciidda ku habboon; labaad, waxay ka fogaan kartaa caqabadaha; saddexaad, biyaha ku habboon ee qoyaanka carradu waa 15-20%.
3. Kahor shaqada, waa inuu hubiyaa qayb kasta oo ka mid ah balka isku xirka, waa inuusan laheyn ifafaalaha dabacsan, wuxuu baaraya qayb kasta dufan, waa inuusan ku darin waqtiga; wuxuu hubiyaa xaalada dharka ee qaybaha si fudud u dhaawacan.
4.Kahor hawlgalka rasmiga ah, waa inaan qorshaynnaa qadka hawlgalka, qaadnaa qalliinka baaritaanka qoto dheer ee qunyar socodka, hagaajinta qoto dheer ee furfurnaanta qoto dheer, hubi xaaladda shaqada iyo tayada hawlgalka ee aagga gawaarida iyo qaybaha mashiinka, isla markaana hagaajino oo xallino dhibaatada waqti ilaa ay ka buuxiso shuruudaha hawlgalka.
Hore: Beeraha Hirgelinta Disc Beerka Loo Iibinayo
Xiga: Beeraha Wareegtada Beeraha
Beeraha trailer hirgelinta-beeraha
Spring Tine Ripper Waayo cagaf 3 Point xijaab F ...
Beeraha Wareegtada Beeraha